Ithini inqubomgomo yebhizinisi lakho?, kuloba uNtokozo Biyela | Umbele
Ekuxilongeni kwami amabhizinisi angaphezu kuka-200, kwangicacela bha ukuthi iningi lamabhizinisi alinayo inqubomgomo yebhizinisi. Empeleni yini inqubomgomo yebhizinisi?
Inqubomgomo yebhizinisi wuhla olwakha nolutshengisa iminxa esiza ibhizinisi lakho. Ikhombisa ukuthi ibhizinisi lakho liyakha kanjani inzunzo, ngobani amakhasimende alo, ufinyelela kanjani kuwona, bunjani ubudlelwano bakho nawo nokuthi itholakala kanjani imali yokuxhasa ibhizinisi lakho ukuze liqhube umsebenzi.
Lolu wuhla lweminxa ongalubhala ekhasini elilodwa nje vo, ukwazi ukusichazela kabanzi ukuthi le minxa ihlangana kanjani ndawonye ukukusiza uwusomabhizinisi ukuthi wenze imali nenzuzo ebhizinisini lakho. Kungabe yisiphi isidingo sokuthi lonke ibhizinisi lisebenzise inqubomgomo na?
Nazi izizathu ezenza kubaluleke loku:
Yenza kube lula ukuthi wena nosebenza nabo niliqonde kalula ibhizinisi lakho;
Yenza ukuthi nikwazi ukufaka amandla afanele ekwakheni lo mbono webhizinisi;
Ungayiguqula noma nini inqubomgomo yebhizinisi lakho uma kushintsha izimo zokusebenza;
Yenza ukuthi wena njengomnikazi webhizinisi ugxile ekujabuliseni amakhasimende akho;
Ikhombisa ukuthi iminxa eminingi eyenza ibhizinisi lakho liphumelele, ihlangene kanjani;
Yenza kube lula ukuqhakambisa umkhombandlela webhizinisi kwabayingxenye yebhizinisi.
Ake sibheke yonke le mikhakha eyisishiyagalolunye ebalulekile ekwenzeni le nqubomgomo ibe nesasasa elingaka:
Bahlukene kanjani abathengi bakho?
Loku kusiza ukuthi wazi kabanzi ukuthi ngobani abathengi noma amakhasimende akho. Kuyasiza ukuthi uqonde kabanzi ukuthi wenzela bani umkhiqizo owenzayo noma uzonikeza bani lobu buchule onabo ekusizeni abantu ebhizinisini.
Yini ozoyinikeza imakethe yakho?
Iyiphi inzuzo amakhasimende akho azoyithola ekuthengeni umkhiqizo wakho noma ukusebenzisa ubuchule bakho? Yini le ehlukile ezokwenza ukuthi amakhasimende akhethe ukuza kuwena angayi koncintisana nabo?
Yimiphi imigudu oyisebenzisayo ukuze umkhiqizo wakho ufinyelele ebantwini noma abantu bazokwazi kanjani ngobuchule onabo abangadinga ukubusebenzisa?
Ubakha kanjani ubudlelwano namakhasimende akho? Loku kubhekisisa ukuthi uwathola kanjani amakhasimende, uwagcina kanjani futhi uwenza kanjani ukuthi ahlale ejabule.
Uyingenisa kanjani imali ebhizinisini?
Loku kubalulekile ukuqondisisa ukuthi ibhizinisi lizoyenza kanjani imali noma inzuzo. Yiziphi izinto okufanele zenzeke ukuze ugcine usukhokheleka ngomsebenzi owenzile.
Yiziphi izithako ezidingekayo ukuze ukwazi ukwenza umkhiqizo ofuna ukuwenza bese uwuyisa ebantwini noma ukuze ukwazi ukufeza okufunwa yikhasimende lakho.
Yiziphi izinhla ezibalulekile ukuthi ibhizinisi lakho likwazi ukuletha imiphumela edingwa amakhasimende? Lisebenza kanjani ibhizinisi ndawonye ukukhiqiza.
Obani ongabasebenzisa abangeyona ingxenye insika yebhizinisi lakho ukuze konke okwenza ngaphakathi ebhizinisi kugcine kufinyelele emakhasimendeni akho noma ezinye izinhlaka zebhizinisi okungenzeka ukuthi awunabo ubuchule bako ngaphakathi?
Iyiphi ingxenye yebhizinisi esebenzisa imali kakhulu? Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi yiziphi izindawo ongakwazi ukunciphisa imali eliyisebenzisayo ukuze wonge futhi ukhulise inzuzo.
Zonke lezi zinto engizibalile zibalulekile ukuthi uzazi noma zisebenzisane zonke ukuze ibhizinisi lakho liphumelele.
Naku-ke okunye okumele ukuqaphele: wukuthi amakhasimende awakhonela ukuthi wena wenze inzuzo kodwa wena kumele uwenelise bese wenza inzuzo. Yingakho amabhizinisi amaningi egcina ewile; awakuqondi loku. Abanikazi bawo bavele bacabange ukuthi amakhasimende ancengile ukusebenzisa imikhiqizo yabo kanti cha, yiwona enzela wena ufefe.
UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi enkampanini yakhe iMindset Shift